20 Shabakado si ay noogu Dhiirrigeliyaan Markaan Abuureyno Astaamaha | Abuurista khadka tooska ah
20 websaydh si ay noo dhiirrigeliyaan marka la samaynayo astaamo
Naqshadaynta calaamaddu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu murugsan ee ku jira naqshadeynta, inta ugu badan ee ay u egtahay inay ugu fudud tahay dhammaantood. Waana in astaamaha ugu fudud ee lagu arko halkaas marar badan ay boqolaal saacadood oo shaqo ah iyo waxbarasho ka dambeeyaan, laakiin lama arko.
Waxa aan kaaga tagay boodka ka dib (naftayda ayaan ku celceliyaa, waan ogahay) waa ururinta 20 degel oo lagu sameeyay WRD iyo inay naga caawin doonaan inaan soo booqano markay tahay ma lihin dhiirigelin ama fikrado markay tahay sameynta astaan, maxaa yeelay websaydhyadaasi waa intaas uun, bogag ay ka buuxaan dhiirrigelin astaan ​​ah.
2 Astaanta faves
7 Astaanta Maalinta
10 Creattica> Calaamadaha
11 Astaanta Abaalmarinta Riyada
14 Gallery Logo
16 Nooca ku saleysan
18 Waxyaalaha Logo
Astaanta Abaalmarinta Riyada
Nooca ku saleysan
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 20 websaydh si ay noo dhiirrigeliyaan marka la samaynayo astaamo
Samee astaamo dijo
Wax ku biirinta wanaagsan ee bogaggan waxaad baari kartaa wax kasta oo aad kari karto oo ku saabsan astaamaha tartanka. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad fahanto sida tartankaagu uga muuqday fikradahooda astaantooda, taas oo ku siin doonta adiga fikrado badan oo aad ku dalban karto astaantaada illaa iyo intaadan khayaameyn ama koobiyeyn naqshadahan.
Jawaab si aad u abuurto astaamo
In yar oo ka mid ah websaydhada hal abuurka leh ee lagu sameeyay Flash